साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको नाफा २४ प्रतिशतले घट्यो - Aarthiknews
साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको नाफा २४ प्रतिशतले घट्यो
मंगलबार, २६ साउन २०७८
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण मंगलवार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार कम्पनीले रू. ४ करोड ७९ लाख २० हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको भन्दा २४ दशमलव २२ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले रू. ६ करोड ३२ लाख ३९ हजार यो नाफा गरेको थियो ।
गत वर्ष उत्पाहित सामाग्री विक्रीबाट ६ दशमलव ८० प्रतिशत बढी रू. १० अर्ब ४० करोड ३५ लाख ८७ हजार आम्दानी गरेको कम्पनीले उक्त सामाग्री विक्री लागत रू. ९ अर्ब ३४ करोड ६१ लाख ४२ हजार भएको जानकारी दिएको छ । अघिल्लो वर्ष विक्री लागत रू. ८ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ६२ हजार थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष विक्री लागत बढी भएकाले पनि नाफामा असर पुगेको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी २० प्रतिशत बोनस पश्चात रू. २३ करोड ४ लाख २९ हजार कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कम्पनीको जगेडा कोष रकम भने २ दशमलव २७ प्रतिशत बृद्धि भई रू. १ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख ४१ हजार पुगेको छ । कम्पनीको नाफामा कमि आएसँगै प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष वार्षिक रू. ३२ दशमलव ९३ रहेको प्रतिशेयर आम्दानी यस वर्ष रू. २० दशमलव ८० मा झरेको छ । हाल कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ भने रू. ४५५ दशमलव ५७ रहेको छ ।